Mma Biribiara Ntwe Wo Mfi Yehowa Ho | Adesua Nsɛm
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Ɛnnɛ mompaw nea mobɛsom no.”—YOS. 24:15.
HWƐ SƐ WUBETUMI ABUA ANAA
Dɛn na wobɛyɛ na w’adwuma antwe wo amfi Yehowa ho?
Wobɛyɛ dɛn de anigyede ato nea ɛda?
Sɛ wo busuani bi gyae Yehowa som a, wobɛyɛ dɛn agyina tebea no ano?
1-3. (a) Dɛn na Yosua yɛe a yebetumi asuasua? (b) Sɛ yɛresi gyinae a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛkae?
SƐ OBI ka sɛ ‘paw’ biribi a, ɛkyerɛ nsɛm pii. Nea wobɛpaw no na ɛbɛkyerɛ sɛnea wopɛ sɛ wobɔ wo bra anaa nea wopɛ sɛ woyɛ wɔ asetenam. Yɛnyɛ mfatoho bi: Fa no sɛ obi nam na okoduu nkwanta bi so. Ɔmfa benkum anaa ɔmfa nifa? Sɛ onim baabi a ɔrekɔ a, ɛnde ɔbɛfa ɔkwan a ɛrekɔ hɔ no so na wagyaw ɔkwan biako no na wanto ne ho angu.
2 Bible ma yehu sɛ nnipa pii hyiaa tebea horow wɔ asetenam a na ɛsɛ sɛ wɔpaw nea wɔbɛyɛ. Nhwɛso bi ni: Na ɛsɛ sɛ Kain kyerɛ sɛ ɔbɛhyɛ n’abufuw so anaa obedi ne koma so asɛm. (Gen. 4:6, 7) Na ɛsɛ sɛ Yosua nso paw sɛ ɔbɛsom nokware Nyankopɔn no anaa atoro anyame. (Yos. 24:15) Na Yosua botae ne sɛ ɔbɛbata Yehowa ho; enti ɔpaw nea ɛbɛboa no ma wayɛ saa. Kain de, na onni botae biara enti nea ɔyɛe no twee no fii Yehowa ho koraa.
3 Yɛn nso ɛtɔ da bi a yehyia asetena mu nsɛm a ɛte sɛ nkwanta bi a yɛakodu so. Sɛ biribi saa si a, ma baabi a worekɔ anaa wo botae ntena w’adwenem. Wo botae ne sɛ wobɛhyɛ Yehowa anuonyam wɔ biribiara mu na woakwati biribiara a ɛbɛtwe wo afi ne ho. (Monkenkan Hebrifo 3:12.) Adesua asɛm yi ne nea edi hɔ no, yɛbɛhwɛ nneɛma ason a yehyia wɔ asetenam ne nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ na yɛamma biribiara antwe yɛn amfi Yehowa ho.
4. Dɛn nti na ehia sɛ yɛyɛ adwuma?
4 Ɛyɛ Kristofo asɛde sɛ wɔhwɛ wɔn ho ne wɔn mmusua. Bible ka sɛ, sɛ obi mpɛ sɛ ɔhwɛ ne fiefo a, ɔyɛ onipa bɔne sen nea onnye nni anaa obi a wapa Yehowa. (2 Tes. 3:10; 1 Tim. 5:8) Enti ehia sɛ yɛyɛ adwuma, nanso sɛ yɛanhwɛ yiye a, adwuma betumi atwe yɛn afi Yehowa ho. Ɛbɛyɛ dɛn na aba saa?
5. Sɛ yɛrepɛ adwuma a, nneɛma bɛn na ehia sɛ yesusuw ho?
5 Fa no sɛ worehwehwɛ adwuma. Ebia adwuma ho yɛ na wɔ wo man mu. Sɛ woanhwɛ yiye a, adwuma biara a ebedi kan ayi ne ti no wubeso mu. Nanso fa no sɛ adwuma no ne nea woasua afi Bible mu nhyia. Dɛn na wobɛyɛ? Anaa fa no sɛ adwuma no begye wo bere pii anaa ɛbɛma woatutu akwan na worennya bere nyɛ wo som adwuma anaa worennya bere mma w’abusua. Dɛn na wobɛyɛ? Wubeso adwuma no mu saa ara na waka sɛ ‘adwuma bɔne ye sen sɛ wobɛtena hɔ kwa’? Kae sɛ, sɛ woansi gyinae pa a, adwuma betumi atwe wo afi Yehowa ho. (Heb. 2:1) Sɛ worehwehwɛ adwuma anaa wopɛ sɛ wosesa adwuma a woyɛ a, wobɛyɛ dɛn asi gyinae pa?
6, 7. (a) Botae bɛn na ebinom de yɛ adwuma? (b) Emu nea ɛwɔ he na ɛbɛma woabata Yehowa ho, na dɛn ntia?
6 Sɛnea yɛadi kan ahu no, ɛyɛ papa sɛ woma wo botae tena w’adwenem. Bisa wo ho sɛ, ‘Dɛn nti koraa na mepɛ sɛ meyɛ adwuma no?’ Sɛ botae a wode yɛ adwuma ne sɛ wubenya biribi kakra de ahwɛ wo ho ne w’abusua ma moatumi asom Yehowa a, ɛnde Yehowa behyira wo. (Mat. 6:33) Sɛ w’adwuma fi wo nsa prɛko pɛ anaa sikasɛm gye gu a, Yehowa rennyaw wo. (Yes. 59:1) Yehowa “nim sɛnea obegye wɔn a woyi wɔn yam som no no afi sɔhwɛ mu.”—2 Pet. 2:9.
7 Nanso ebia wo botae ara ne sɛ wubenya wo ho. Ampa ara ebia wubenya wo ho. Nanso kae sɛ ɛba saa mpo a, woremfa wo ho tɔtorɔtɔɔ. (Monkenkan 1 Timoteo 6:9, 10.) Sɛ woma sikapɛ ne adwuma gye w’adwene a, ɛbɛtwe wo afi Yehowa ho.
8, 9. Dɛn na ɛsɛ sɛ awofo bisa wɔn ho fa wɔn adwuma ho? Dɛn ntia?
8 Ɛsɛ sɛ awofo kae sɛ gyinae a wosi ka wɔn mma. Sɛ wo mma hwɛ wo a, dɛn na wohu sɛ ehia wo paa? W’adwuma anaa wo ne Yehowa adamfofa? Sɛ wohu sɛ dibea, anuonyam ne sika na ehia wo paa a, wugye di sɛ ɛsa a ɛmfata a woatwa ato hɔ no wɔbɛfa so? Anaa mmofra no behu sɛ nea woreyɛ no nyɛ ne kwan so? Kristoni ababaa bi kae sɛ: “Me mmofraase pɛɛ na mihui sɛ adwuma agye me papa adwene. Mfiase no na misusuw sɛ ɔrebrɛ na ama yɛn abusua no adi yiye. Na ɔpɛ sɛ yɛn nsa ka nea yehia biara. Nanso nnansa yi nneɛma asesa. Ɔde ne bere nyinaa yɛ adwuma de totɔ nneɛma akɛseakɛse a yɛnhyɛ da nhia. Enti seesei yɛn abusua no agye din sɛ abusua a sika wom, na ɛnyɛ abusua a ɛhyɛ nkurɔfo nkuran ma wɔsom Yehowa. Sɛ me papa boa abusua no ma yɛsom Yehowa yiye a, mepɛ sen sɛ ɔbɛtete sika ama yɛn.”
9 Awofo, monhwɛ na mo adwuma antwe mo amfi Yehowa ho. Monyɛ nhwɛso pa mma mo mma. Momma wonhu sɛ agyapade a ɛsom bo ma mo paa ne Yehowa adamfofa na ɛnyɛ sika anaa ahode.—Mat. 5:3.
10. Dɛn na ɛsɛ sɛ aberante anaa ababaa susuw ho ansa na wapaw adwuma a ɔbɛyɛ daakye?
10 Sɛ woyɛ aberante anaa ababaa a woredwen adwuma a wobɛyɛ daakye ho a, dɛn na ɛbɛboa wo ma woasi gyinae pa? Sɛnea yɛahu no, ma wo botae ntena w’adwenem. Sɛ wopɛ sɛ wokɔ sukuu anaa wusua adwuma a, wususuw sɛ adwuma a wopɛ sɛ woyɛ daakye no bɛboa wo ma wode Yehowa som adi kan anaa ɛbɛtwe wo afi Yehowa ho? (2 Tim. 4:10) Wiase yi mu nnipa de, wɔn ani begye oo, wɔn ani nnye oo, sika a wɔwɔ na ɛbɛkyerɛ. Saa na wopɛ sɛ woyɛ anaa? Anaa wode wo ho bɛto Yehowa so sɛnea Dawid yɛe no? Ɔkae sɛ: “Mayɛ abofra, na afei mabɔ akwakoraa, nanso minhuu onipa trenee a wɔagyaw no, anaasɛ n’asefo srɛ aduan.” (Dw. 37:25) Eyi te sɛ nea wonam na woakopue nkwanta bi so. Ɔkwan biako bɛtwe wo afi Yehowa ho, na biako a ɛka ho no bɛyɛ nhyira ama wo. (Monkenkan Mmebusɛm 10:22; Malaki 3:10.) Akwan yi mu nea ɛwɔ he na wobɛpaw? *
NNEƐMA A WODE GYE W’ANI
11. Dɛn na Bible ka wɔ anigyede ho, nanso dɛn na ɛsɛ sɛ yɛkae?
11 Bible nkaa wɔ baabiara sɛ ɛyɛ bɔne sɛ obi begye n’ani anaa ɛyɛ beresɛe sɛ obi bɛyɛ saa. Paulo kyerɛw Timoteo sɛ: “Apɔwmuteɛteɛ so wɔ mfaso kakra.” (1 Tim. 4:8) Bible ka mpo sɛ “ɔserew nso wɔ ne bere” na “ahuruhuruw nso wɔ ne bere,” na ɛhyɛ yɛn nkuran sɛ yennye yɛn ahome. (Ɔsɛnk. 3:4; 4:6) Nanso sɛ woanhwɛ yiye a, nneɛma a wode gye w’ani betumi atwe wo afi Yehowa ho. Ɛbɛyɛ dɛn aba saa? Sɛ anigyede no mfata anaa ebegye bere pii a, ɛnde na asiane wom.
Sɛ yɛde nneɛma a ɛfata gye yɛn ani na yɛansɛe bere pii a, ɛma yɛn ani gye
12. Sɛ worepaw anigyede bi a, nsɛm bɛn na ɛsɛ sɛ wususuw ho?
12 Momma yenni kan nhwɛ anigyede ko a ɛsɛ sɛ yɛpaw. Wubetumi anya nneɛma a ɛfata de agye w’ani. Nanso ɛnnɛ nneɛma a nnipa dodow no ara de gyigye wɔn ani yɛ nea Onyankopɔn kyi. Anigyede no mu dodow no ara fa awudisɛm, ahonhonsɛm ne nna mu ɔbrasɛe ho. Enti sɛ worepɛ biribi agye w’ani a, ɛsɛ sɛ woma w’ani da hɔ paa na wubisa wo ho sɛ: Ade a mede gye m’ani ka me dɛn? Dɛn na ɛde hyɛ me mu—awudisɛm, akansi, anaa ɔmampɛ? (Mmeb. 3:31) Ɛma mesɛe sika pii? Ebetumi ato afoforo hintidua? (Rom. 14:21) Nnipa bɛn na saa anigyede no ma me ne wɔn bɔ? (Mmeb. 13:20) Ɛde akɔnnɔ bɔne hyɛ me mu anaa?—Yak. 1:14, 15.
13, 14. Dɛn nti na ɛsɛ sɛ wususuw bere dodow a wode gye w’ani ho?
13 Ade foforo a ɛsɛ sɛ yesusuw ho ne bere dodow a yɛde gye yɛn ani. Bisa wo ho sɛ, ‘Mesɛe bere pii gye m’ani ma enti minnya bere nsom Yehowa yiye?’ Hyɛ no nsow sɛ, sɛ wosɛe bere pii wɔ anigyede ho a, wubewie no na anigye ankasa abɔ wo. Wɔn a wɔde anigyede to nea ɛda no, wɔn mmom na wɔn ani gye. Dɛn ntia? Efisɛ wonim sɛ wɔde “nneɛma a ehia” paa adi kan, enti sɛ wogye wɔn ani kakra a, wɔn ahonim nhaw wɔn.—Monkenkan Filipifo 1:10, 11.
14 Ebia ɛbɛyɛ wo sɛ sɛe bere pii gye w’ani, nanso kae sɛ ebetumi atwe wo afi Yehowa ho. Onuawa bi a wadi mfe 20 a wɔfrɛ no Kim huu nokwasɛm a ɛwɔ saa asɛm no mu. Ɔkae sɛ: “Kan no, apontow biara nni hɔ a wunhu me wɔ ase. Fida, Memeneda, ne Kwasida biara, yɛbɔ so wɔ baabi. Nanso seesei mabehu sɛ nneɛma pii wɔ hɔ a ehia sɛ mede me bere yɛ. Meyɛ daa kwampaefo, na mesɔre anɔpa nnɔnsia kɔ asɛnka, enti merentumi nkogye m’ani saa nkosi anadwo dasum sɛnea na meyɛ kan no. Minim sɛ ɛnyɛ bɔne sɛ obi bepue akogye n’ani, nanso ebetumi ayi obi adwene afi nneɛma a ɛho hia paa so. Enti mahu sɛ ɛsɛ sɛ mede anigyede to nea ɛda.”
15. Awofo bɛyɛ dɛn aboa wɔn mma ma wɔapaw anigyede a ɛfata?
15 Ɛyɛ awofo asɛde sɛ wɔhwɛ wɔn abusua na wɔboa wɔn ma wɔsom Yehowa yiye. Afei nso ɛsɛ sɛ awofo hwehwɛ kwan a wɔbɛfa so ne wɔn mma agye wɔn ani, na ɛnsɛ sɛ wosusuw sɛ anigyede biara yɛ bɔne. Nanso ɛsɛ sɛ wɔma wɔn ani da hɔ na wohu sɛ ɛnyɛ anigyede nyinaa na ɛfata. (1 Kor. 5:6) Sɛ wode w’ani to fam a, wubenya nneɛma a ɛfata a w’abusua betumi de agye wɔn ani. * Ɛba saa a, anigyede rentwe wo ne wo mma mfi Yehowa ho.
16, 17. Asɛm a ɛyɛ yaw bɛn na ato awofo pii? Yɛyɛ dɛn hu sɛ Yehowa nim yaw a wɔrefa mu no?
16 Ɔdɔ a awofo wɔ ma wɔn mma mu yɛ den paa. Yehowa de eyi mpo yɛɛ mfatoho de kyerɛɛ sɛnea ɔdɔ ne nkurɔfo. (Yes. 49:15) Enti sɛ yɛn busuani bi gyae Yehowa som a, ebetumi ama yɛadi awerɛhow kɛse. Onuawa bi a wotuu ne babea fii asafo no mu kae sɛ: “Asɛm no bubuu me. Midwen ho ara a, minhu nea enti a ogyaee Yehowa som. Ɛyɛɛ me sɛ me na mannyɛ m’adwuma yiye nti na ɛbaa saa.”
17 Sɛ asɛm a ɛte saa ato wo a, hu sɛ Yehowa nim ɛyaw a worefa mu. Bere a onipa a Yehowa dii kan bɔɔ no tew atua na Noa beresofo nso antie n’asɛm no, “odii awerɛhow ne komam.” (Gen. 6:5, 6) Sɛ biribi a ɛte saa ntoo wo da a, ebia worenhu sɛnea asɛm no yɛ yaw fa. Nanso nyansa nnim sɛ woma ɔkwammɔne a wo busuani a wɔatu no faa so no twe wo fi Yehowa ho. Sɛ wo busuani gyae Yehowa som a, wubedi awerɛhow, nanso dɛn na wobɛyɛ na woanyɛ ade antra so?
18. Sɛ obi gyae Yehowa som a, adɛn nti na ɛnsɛ sɛ n’awofo nya adwene sɛ wɔn na wɔama aba saa?
18 Nsusuw sɛ wo na woama aba saa. Sɛ wo busuani ahyira ne ho so abɔ asu a, ‘ɔno ankasa bɛsoa n’adesoa.’ Sɛ ɔbɛsom Yehowa oo, ɔrensom no oo, egyina ɔno ara so. (Gal. 6:5) Nea wayɛ bɔne no na Yehowa ne no wɔ asɛm, ɛnyɛ wo. (Hes. 18:20) Afei hwɛ na woampia asɛm no anto afoforo so. Yehowa ayɛ nhyehyɛe a ɔde teɛ ne nkurɔfo so; ɛnyɛ biribiara nsɔre ntia saa nhyehyɛe no. Enti mmɔ mpanyimfo no sobo, efisɛ ɛyɛ wɔn asɛde sɛ wɔbɔ asafo no ho ban. Ɔbonsam mmom na ɛsɛ sɛ wo ne no di asi na wantwe wo amfi Yehowa ho.—1 Pet. 5:8, 9.
Mfomso nnim sɛ wubenya anidaso sɛ wo dɔfo bi a wɔatu no bɛsan abɛsom Yehowa
19, 20. (a) Dɛn na awofo a wɔatu wɔn mma betumi ayɛ na wɔatumi agyina tebea no ano? (b) Anidaso bɛn na awofo a wɔte saa betumi anya?
19 Afei hwɛ na wo bo amfuw Yehowa. Woyɛ saa a na woretwe wo ho afi Yehowa ho. Ɛsɛ sɛ woma wo busuani no hu pefee sɛ wofam Yehowa ho denneennen, na woremma kwan mma obusuani biara nwae wo mfi ne ho. Wotu wo busuani bi a, nea ɛbɛboa ma woagyina tebea no ano ne sɛ wobɛbata Yehowa ho denneennen. Hwɛ na woantwe wo ho amfi wo nuanom Kristofo ho. (Mmeb. 18:1) Bɔ Yehowa mpae na ka wo komam asɛm kyerɛ no. (Dw. 62:7, 8) Hwɛ na woamfa kwatikwan biara so ne nea wɔatu no no ammɔ. Ebia obi bɛka sɛ ɔbɛkyerɛw nsɛm afa Intanɛt anaa telefon so akɔma ne busuani a wɔatu no no, nanso ɛnyɛ papa. (1 Kor. 5:11) Fa nsi ne ahokeka som Yehowa. (1 Kor. 15:58) Onuawa a yɛaka ne ho asɛm dedaw no kae sɛ: “Minim sɛ ɛsɛ sɛ meyere me ho som Yehowa de hyɛ me gyidi den na sɛ daakye me ba no san bɛsom Yehowa a, matumi aboa no.”
20 Bible ka sɛ ɔdɔ wɔ “biribiara mu anidaso.” (1 Kor. 13:4, 7) Enti mfomso nnim sɛ wubenya anidaso sɛ wo dɔfo bi a wɔatu no bɛsan abɛsom Yehowa. Afe biara wɔn a wɔatu wɔn pii sakra wɔn akwan na wɔsan ba Yehowa ahyehyɛde no mu. Sɛ wonu wɔn ho a, Yehowa de kyɛ wɔn efisɛ Bible ka sɛ ‘ɔwɔ ɔpɛ sɛ ɔde bɔne befiri.’—Dw. 86:5.
PAW NEA EYE
21, 22. Dɛn na wopɛ sɛ wopaw wɔ asetenam?
21 Yehowa ama nnipa hokwan a yɛde paw nea yɛpɛ. (Monkenkan Deuteronomium 30:19, 20.) Nanso nea yɛbɛpaw no, yebebu ho akontaa. Enti ɛsɛ sɛ Kristoni biara bisa ne ho sɛ: ‘Ɔkwan bɛn na menam so? So mama adwuma, anigyede, anaa m’abusua atwe me afi Yehowa ho?’
22 Ɔdɔ a Yehowa wɔ ma ne nkurɔfo rensa da. Ade biako a ebetumi ama yɛne Yehowa ntam atetew ne sɛ yebesi gyinae bɔne. (Rom. 8:38, 39) Nanso ɛnsɛ sɛ yɛma ɛba saa da! Si wo bo sɛ woremma biribiara ntwe wo mfi Yehowa ho. Adesua a edi hɔ no, yɛbɛhwɛ nneɛma foforo anan a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yiye wɔ ho na antwe yɛn amfi Yehowa ho.
^ nky. 10 Sɛ woresusuw adwuma a wobɛyɛ daakye ho a, hwɛ Questions Young People Ask—Answers That Work, Po 2, ti 38.
^ nky. 15 Sɛ wopɛ anigyede ho nsɛm pii a, hwɛ November 2011 Nyan! (Borɔfo de), kratafa 17-19.